Mayelana nathi - Tianfeng Environmental Materials Technology Co., Ltd.
Imvelo Materials Technology Co., Ltd.
Sine iminyaka engaphezu kwengu-10 + yokukhiqiza isipiliyoni
Singungcweti ohamba phambili wokulawula ukutheleleka, ukwenziwa kwamakhethini alahlwayo asebenza ngama-anti-bacterial kanye ne-flame-retardant. Ngemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme, sesibe enye yezinkampani ezethenjwa kakhulu embonini yezikhungo zezokwelapha.
Ukuzibophezela kwethu ekuletheni imiphumela kusenze sakwazi ukwakha ubudlelwane obude obude namakhasimende ethu emhlabeni wonke futhi silandele izithembiso zethu njalo.
ISuzhou Tianfeng Environmental Materials Technology, eyasungulwa ngonyaka ka-2008, iyinkampani ephelele ebhekelela amakhethini asezingeni eliphakeme asesibhedlela alahlwa ngekhono locwaningo nentuthuko, ukwakhiwa nokukhiqizwa. Imikhiqizo yethu ifaka amakhethini ajwayelekile alahlwayo, amakhethini anezikhala namakhethini aprintiwe. Zonke ezinezingwegwe nelebuli yokushisa enamathiselwe. Amakhethini ethu alahlwayo esizukulwane esisha aklanyelwe ukufaka amakhethini akhona asebenzisekayo nawashekayo ngezindleko ezinkulu zokonga kanye nokulawulwa kokutheleleka okuthuthukile.
I-POLYPROPYLENE PRODUCTION LINE
Lo mugqa wokukhiqiza intambo ye-polypropylene fiber spunbonded nonwoven imishini yendwangu. Impahla yayo eluhlaza yi-polypropylene (PP). Indwangu engavukelwe esiyikhiqizayo inamandla amakhulu, ukuthamba okuhle, ubumsulwa, i-anti-bacterial, ukumelana nokugqwala, amandla wezinga eliphezulu wokudweba kanye nezinga lokunweba. Umbala nesisindo sendwangu kungahluka ngokuya ngokufunwa kwamakhasimende.
Isipiliyoni seminyaka engu-13 + sikhiqiza amakhethini ama-cubicle alahlwayo.
Izinga Lomhlaba Wonke
Kufakazelwe ukuhlangabezana nezindinganiso zomhlaba jikelele ze-anti-bacterial ne-flame retardant.
Umugqa wokukhiqiza ozimele olwa namagciwane.